7 hunyanzvi hunyanzvi hunofanirwa kuve neCommerce Manager | ECommerce nhau
7 hunyanzvi hwehunyanzvi hunofanirwa kuve neCommerce Manager
Iyo nhamba yeecommerce maneja haina kuzivikanwa muSpain. Nekudaro, ndeimwe yeakanyanya kukosha ayo anoda akateedzana ehunyanzvi hunyanzvi kuti huitwe.
Vazhinji vanorondedzera iyi nhamba kuna maneja wenharaunda, uye ndizvozvo, asi zvinonyanya kutarisana nekutengesa pamhepo. Zvino chii hunyanzvi hunyanzvi unoda munhu anoda kuzvipira kuita iri basa? Nhasi tinotarisa pane akakosha.
1 Chii chinonzi ecommerce maneja
2 Mabasa e ecommerce maneja
3 Unyanzvi hwehunyanzvi hwecommerce maneja
3.1 Iva nehunhu uye mafungiro
3.2 Iva nehunyanzvi hwekutaurirana
3.3 Kuva mutungamiri
3.4 Kugona kuronga
3.5 Unyanzvi hwehunyanzvi: Strategic chiratidzo
3.6 Zvemari, zvigadzirwa, chikamu ruzivo ...
3.7 Unyanzvi hwehunyanzvi: Gadzira uye uvandudze
Chii chinonzi ecommerce maneja
Ecommerce maneja inyanzvi uyo iri pamusoro pekugadzirisa uye kutungamira ecommerce, kana online chitoro. Kune izvi, mabasa ayo akavakirwa pakunzwisisa, kubata uye kudzora maitiro ese ekutengesa, kubva pakutanga chaipo (painotaura nevatengi vatengi) kusvika kumagumo, izvo zvinogona kunge zviri kutengesa zvigadzirwa kana mhinduro yakagamuchirwa. Mushure mekutengesa.
Kuti uite basa rako, unofanirwa kuziva kuti ndeapi mabasa ako (chimwe chinhu chatichataura zvishoma nezve pazasi), pamwe nehunyanzvi hunyanzvi hwaunoda kusimudzira.
Mabasa e ecommerce maneja
Sezvakaita nemanejaja wenharaunda, ecommer maneja anoita mabasa akasiyana kwazvo, ese akatarisana nechinangwa chekupedzisira, chinova chekutengesa chigadzirwa, sevhisi ... iyo yainofanirwa. Nekudaro, pakati pemabasa ayo ndeaya:
Gadzira zano rebhizimusi repamhepo.
Dzidza chikamu chiri muchitoro chepamhepo.
Ita chirongwa cheSEO kuisa ecommerce.
Ita chirongwa chekushambadzira online.
Gadzira mafaro ekushandurwa (kusvika kune vatengi vazhinji uye kuita kuti vatenge).
Natsiridza ruzivo rwevashandisi uye kushandiswa kwechitoro chepamhepo.
Kutsvaga munhu anoita zvese izvi zvakaoma, kunyanya sezvo zvinganzwika sezviri nyore, asi hazvisi. Nekudaro, kana iwe wawana iye chaiye munhu, hunyanzvi hwako hunyanzvi hunogona kuzvitaurira (pamwe nemhedzisiro iwe yaunowana kubva kubasa ravo).
Unyanzvi hwehunyanzvi hwecommerce maneja
Paunenge iwe waziva izvo ecommerce maneja uye zvese zvainoita (ndiko kuti, ayo mashandiro), iwe unofanirwa kuziva kuti havazi vese vanogona kuita iri basa. Ichokwadi ndechekuti kune humwe hunyanzvi hunofanirwa kunge huripo chaizvo. Uye ndizvo zvatiri kuzokurukura zvinotevera.
Uye ndizvo here, kuve nyanzvi ecommerce maneja unofanira:
Iva nehunhu uye mafungiro
Vanoratidzika sezwi rimwe chete. Uye pazviitiko zvakawanda, izvi zvinoshandiswa pasina kuziva kuti mutsara unotaurwa zvisizvo. Asi ese ari maviri anodikanwa kune ecommerce maneja.
Kuti ujekese kwauri, kugona tarenda, hunyanzvi hwaunofanirwa kuita chimwe chinhu (mune ino kesi, kutengesa chero chinhu kune mumwe munhu).
Kune rumwe rutivi, maitiro anoreva hunhu hwemunhu, Ndokunge, maitiro aunoita mumamiriro akasiyana (kana ukavhunduka, kana uine chokwadi, kana uchiparidzira kuda kwezvaunotaura ...).
Mune mamwe mazwi, ecommerce maneja anofanirwa kukwanisa kutengesa izvo mutengi anazvo: sevhisi, zano, chigadzirwa ... Naizvozvo, zvakakosha kuti vave neruzivo rwakawanda rwechikamu, uye chiratidzo chebhizimusi chekutora. mukana wemikana yekuwana kutengesa.
Iva nehunyanzvi hwekutaurirana
Fungidzira kuti iwe uri ecommerce maneja wechitoro chepamhepo. Uye ivo vanokukumbira iwe kuti utengese chigadzirwa. Nekudaro, iwe haugone, nekuda kwekunyara kwako, kutanga hukama nevatengi, kwete kana kuvaudza kuti une chigadzirwa chavari kutsvaga. Mune mamwe mazwi, iwe unorasikirwa nemutengi.
Ecommerce maneja haakwanise izvozvo. Inofanira ziva zvekutaura, kuzvitaura sei uye kunaani kuzadzisa mhedzisiro yakanaka. Zvikasadaro, iwe haugone kuita basa rako nemazvo.
Ehe hongu, newewo unofanirwa kukwanisa kutungamira timu, kana iwe uinayo, kana kufumura zvaunoda uye vamwe vachivagutsa kuitira kuti vaite basa ravo. Uye ndezvekuti, kazhinji, izvi zvakaoma kuzviita, zvakawanda kune munhu mumwe chete, uye kune nguva zhinji kune zvakawanda zvinogona kuzotamba (uye kuti uyu nyanzvi anofanira kuratidzira).
Naizvozvo, kugona kuita sarudzo, kugadzirisa matambudziko, kana kukurudzira, kwakakosha kwazvo mune ino kesi.
Semuenzaniso, fungidzira kuti uri ecommerce maneja wekambani, asi chikamu chezvenhau (mapikicha, mavhidhiyo…) chinotungamirirwa nerimwe dhipatimendi. Kana iwe uchida iro basa ravanoita kuti vaite basa rako, iwe unofanirwa kuratidzana navo uye uzive chekukumbira, riini uye sei.
Unyanzvi hwehunyanzvi: Strategic chiratidzo
Kana usiri munhu anoziva zviripo neramangwana rebato rako, saka uchave nematambudziko. Uye chinhu chakanyanya kukosha nezve bhizinesi kugadzirisa kune chikamu chaunoshanda. Mune mamwe mazwi, ziva kuti zvinhu zvinoshanduka sei uye zvinoita kuti kambani itendeuke ichitevedzera maitiro aripo.
Semuenzaniso, kana iwe uine bhizinesi rekuveza, iwe unoziva kuti izvozvi zvava kunyangarika, asi kuchine avo vanoziva maitiro ekugadzirisa uye nekushandura bhizinesi ravo kune iro rinonyatsoshanda (semuenzaniso, kushandura vatengi vavo kuita imwe yepamusoro , kana kupedzisa humbozha, nezvimwewo).
Zvemari, zvigadzirwa, chikamu ruzivo ...
Hatisi kuzokuudza kuti iwe unofanirwa kuve chishamiso uye uzive zvese. Asi pane rumwe ruzivo rwunonongedza basa, uye urwo unofanirwa kufunga nezvaro. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe udzidzise mavari.
Semuenzaniso, munzvimbo yemari, unofanirwa kuona kuti bhizinesi rako richararama, ndiko kuti, iwe unofanirwa kuziva nezve pfungwa dzemari kuti utore sarudzo, uye kudzivirira mamiriro ezvinhu ane njodzi, kana kutungamira kambani munzira yekubudirira.
Unyanzvi hwehunyanzvi: Gadzira uye uvandudze
Ichi pamwe chikamu chakakosha kwazvo chebasa seye ecommerce maneja, uye imwe yehunyanzvi hunyanzvi hwaunofanirwa kukoshesa zvakanyanya. Iyo ndiyo ichaita kuti iwe usiyane iwe pachako kubva kune mamwe makambani uye unokwezva vatengi.
Naizvozvo, zvinonzi nyanzvi inofanirwa kuve nepfungwa dzekugadzira, kunyatsocherechedza uye kufarira zvinonetsa, pamusoro pekutsvaga mazano uye kuva nemaonero akasiyana zvakanyanya kubva kune vamwe (mupfungwa yekuti vanoona maonero ekufunga izvo vamwe vasina kufunga nezvazvo)
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » 7 hunyanzvi hwehunyanzvi hunofanirwa kuve neCommerce Manager
Chii chinonzi Google Shopping uye chinoshanda sei